Eksaody 20: 1-17. - Ny Baiboly
Eksaody toko 20, 1-17.
Famoahana ny lalàna - Ny didy folo - Ny Otely.
1Ary Andriamanitra nanonona ireto teny rehetra ireto nanao hoe: 2Izaho no Iaveh Andriamanitrao, izay namoaka anao tany amin'ny tany Ejipta, tany amin'ny trano fanandevozana. 3Tsy hanana andriamani-kafa eo anatrehako hianao.
4Tsy hanao sarin-javatra voasokitra ho anao, na sary fampisehoana ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony, na ny eny amin'ny tany ambany, na ny any amin'ny rano ambanin'ny tany. 5Tsy hiankohoka eo anatrehan'ireny na hanompo azy akory hianao, fa izaho Iaveh Andriamanitrao dia Andriamanitra saro-piaro, ka amin'izay mankahala ahy, mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny taranaka fahatelo sy fahefatra, 6ary amin'izay tia ahy sy mitandrina ny didiko kosa, mamindra fo hatramin'ny taranaka faharivo.
7Tsy hanonom-poana ny anaran'ny Tompo Andriamanitrao, fa tsy havelan'ny Tompo tsy ho voasazy izay manonom-poana ny anarany.
8Tsarovy ny andro Sabata mba hanamasina azy. 9Ny andro enina no hiasanao sy hanaovanao ny taozavatrao. 10Fa ny andro fahafito dia Sabata voatokana ho an'ny Tompo Andriamanitrao; tsy hanao asa na inona na inona, na ny tenanao, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy, na ny ankizilahinao, na ny ankizivavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahiny izay tafiditra ny vavahadinao. 11Satria ny andro enina no nanaovan'ny Tompo ny lanitra, ny tany, ny ranomasina, mbamin'izay rehetra ao aminy, fa ny andro fahafito dia nitsaharany, ka izany no nanasoavan'ny Tompo ny andro Sabata sy nanamasinany azy.
12Manajà ny ray aman-dreninao mba ho lava andro hianao any amin'ny tany omen'ny Tompo Andriamanitrao anao.
13Tsy hamono olona hianao.
14Tsy hijangajanga hianao.
15Tsy hangalatra hianao.
16Tsy hitsangan-ko vavolombelona mandainga hamely ny namanao hianao.
17Tsy hitsiriritra ny tranon'ny namanao hianao, tsy hitsiriritra ny vadin'ny namanao, na ny ankizilahiny na ny ankizivaviny, na ny ombiny na ny ampondrany, na inona na inona amin'ny zavatry ny namanao. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3738 seconds